About Us - Tianjin Shengxin Ezemidlalo Izimpahla Co., Ltd
Tianjin Shengxin Ezemidlalo Izimpahla Co., Ltd yasungulwa ngo-2011, okuyinto ayisipesheli kwenziwa futhi kwakhiwa izindawo ezemidlalo, futhi yokukhiqiza ukuqina ongaphandle apharathasi, yezinyoni enkundleni yomdlalo webhola, multi-purpose ebaleni lokudlala, esikole ezemidlalo apharathasi, efundisa amadivayisi, basketball ukuma, volleyball okuthunyelwe, okuthunyelwe badminton, okuthunyelwe ithenisi, ongaphandle anezikhala ukuvikela nesizungu ibhande. Singasho futhi akhiqize zonke izinhlobo apharathasi angajwayelekile njengoba isicelo amakhasimende '. Manje Shengxin bekulokhu ubulungu China Zemidlalo Federation (CSGF), China Kumile & Zemidlalo Association (CSSGA), China Izinsiza kusebenza Sikhungo Imboni Association (CEEIA), Tianjin Zemidlalo Imboni Association (TSIA), futhi umqondisi iyunithi School Zemidlalo Isisetshenziswa Yegatsha Umgwamanda e CEEIA futhi Zemidlalo Izinsiza kusebenza Professional iKomidi TSIA. General Manager Zhang Junyuan sikhethwe njengoba umqondisi emi TSIA.
Ngemva kweminyaka engu-7 asathuthuka, Shengxin Ezemidlalo ubelokhu inkampani izilomo Chinese imishini ukuqina Imboni. Manje, amandla kanye embonini yethu ndawo endaweni yokuqala e China. I ezishintshayo imishini ukukhiqizwa ungaphakathi ezingeni okuholela umkhakha. Manje thina omunye eziphezulu ezinkampanini 10 okuyinto ukuthola isitifiketi NSCC futhi ezingeni ehamba phambili e Tianjin. Njengamanje, imikhiqizo yethu NSCC siphezu 100 izinhlobo okuyinto ezingeni umfula e NSCC izinkampani isitifiketi angaphezu kuka-40
Ukuthuthukiswa okusheshayo we umkhakha zemidlalo uyabanikeza ithuba Shengxin Ezemidlalo. yokuthengisa yethu engenayo e 2017 bekulokhu RMB angaphezu kwezigidi ezingu-100. Inkampani yethu kuhlelwe ukusheshisa umkhakha isakhiwo, ukunweba imikhiqizo series futhi kakhulu ukwandisa yokuthengisa imali e 2018-2020.
Sesiyiphothule e 2018:
1.Level up line ukukhiqizwa, ukukhiqizwa endaweni 20,000 square metres. Umthamo ongafinyelela 180,000 izingcezu, okukhipha value abayizigidi ezingu-180 RMB.
2.Download eyakhelwe zasendlini ukuqina apharathasi ukukhiqizwa isitshalo ongafinyelela eziyizigidi ezingu-60 okukhipha value onyakeni wokuqala.
3. Tshala Imali 3 million RMB minyaka ukubambisana eziphambili Taiwan RD ithimba ngoba ukuthuthukisa ukukhiqizwa ukuqina nangaphandle chungechunge entsha, okuyinto kakhulu ukuqinisa ikhono yenkampani ye okuklama, ukukhiqiza kanye innovating.
4.Built isevisi ithimba abantu phezu 20 emva-yokuthengisa ukuvumela distributers mahhala kusukela ukukhathazeka kanye namakhasimende qiniseka.
5.Introduced esigcwele othomathikhi eziyisithupha-eksisi Welding amarobhothi ezingasetshenziswa ekubonile 360 degree Welding ngaphandle engela efile futhi siphenduka emanzini othomathikhi. I ezishintshayo ongafinyelela 100%. Siphinde esethula imishini eziphambili efana esiyingqayizivele othomathikhi odlulayo kabili komzila sishaye nokudweba ukugeleza umugqa, zezinombolo ukulawula ipayipi ahlabayo umshini, zezinombolo ukulawula ipayipi eguqa umshini nokunye. Zonke lezi imishini eziphambili ngokusobala ukuthuthukisa imikhiqizo izinga nokuphumelela kwemikhiqizo lifakazelwa futhi ukwehlisa iindleko ukukhiqizwa.
Manje utshalomali lethu Imininingwane million 125 RMB (akufaki umhlaba futhi isakhiwo workshop). Okufakwa engathutheki kuyisivumelwano RMB kwezigidi ezingu-60, enhlokodolobha lwamanje 65 million RMB.
Eminyakeni eyalandela, okokuqala, sifuna ukuthuthukisa imikhiqizo ezihlakaniphile ngokusebenzisa ucwaninga noma ethula. Akukhona nje hlala ukuthengwa emakethe ngobuningi, kodwa futhi uthole amakhasimende evamile ezithakazelisayo niye imikhaya evamile. Okwesibili, sifuna ujoyine emnothweni Wabelana ku ngezinga elikhulu futhi ngokujulile ukwabelana ibhonasi kwenqubomgomo ukuqina kazwelonke. Ithemba ibenze Inthanethi, ngamafu, idatha big, i-Internet ye-into nobungqabavu kazwelonke wokuthuthukisa ndawonye, ​​ake ubuchwepheshe ukusiza ukuqina kazwelonke.
Zethu ukuhlela iminyaka emithathu Kunjengoba Izifutho:
2018, yokuthengisa imali izigidi ezingu-180 RMB, inzuzo eziyizigidi ezingu-30 RMB;
2019, yokuthengisa imali eyizigidi ezingama-300 RMB, inzuzo RMB kwezigidi ezingu-50;
2020, yokuthengisa engenayo 500 kwezigidi ezingu RMB, inzuzo RMB ezingu-100.
Sizokwenza ube ezingeni ehamba phambili ngemva ukufeza isikalo!
Ngo-September 2017, Shengxin Ezemidlalo babebambisene Tianjin Youfa Steel Pipe Group, ephethe iphephendaba ingenye "Top Enterprises Chinese 500" engaphezu kwengu-12, ukwakha entsha Shengxin Ezemidlalo ndawonye. Ukubambisana kuthuthukisa ukwakhiwa entsha ifektri yenkampani, umshini omusha isingeniso kanye nemikhiqizo emisha ukuthuthukiswa.